Eedeysane Fahad Yaasiin oo saaka soo galay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Agaasimihii hore ee hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, eedeysane Fahad Yaasiin, ayaa saaka ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho, kadib todobaad ay duulimaadyada shacabku diideen in ay dalka ku soo celiyaan.
Fahad oo billowgii bishaan laga raacdeeyay taliska NISA, kadib markii uu ku lug yeeshay eedo af-duub iyo khaarijin, ayay saaka keentay diyaarad qaas ah, waxaa jira jira xogo sheegay inuu soo maray Addis Ababa, kadibna ay halkaas ka soo qaatay diyaarad ay leeyihiin Militariga Itoobiya.
17 September 2021, war-saxaafadeed ay soo saareen Kooxda Farmaajo, waxa ay ku xaqiijiyeen in Fahad Yaasiin, saacado badan lagu xannibay dalka Jabuuti, ka hor inta aan dib loogu celin Istaanbuul.
Saraakiil amni ayaa xilligaas sheegay in Fahad uu Muqdisho ka waday abaabul ciidan iyo inuu khalkhal geliyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, si uu faraxa uga baxo amniga Caasimadda.
Imaanshaha Fahad, ayaa ku soo aadeysa xilli ay ku furan tahay dacwo maxakamadeed, isla-markaana uusan lahayn awooddiisi siyaasadeed ee uu dalka kula amar taagleynayay ku dhawaad shantii sano ee la soo dhaafay, waxaana markii ugu horreysay tan iyo markii loo magacaabay taliska agaasimaha NISA, saaka la dajiyay guri aan ahayn guriga Habar Khadiijo.
Ilo-wareedyo Keydmedia ay la xiriirtay oo si gaar ah ula socday xiyiraaddii Fahad ee Jabuuti ayaa sheegay in Fahad laga helay baasaboorro iskugu jira dalalka soo socda:
Jabuuti – Baasaboor caadi ah
Itoobiyaan – Baasaboor caadi ah
Itoobiyaan – Baasaboor diblomaasi ah
Yemen – Baasaboor caadi ah
Qatar – Baasaaboor caadi ah
Qatar – Baasaboor diblomaasi ah
Somali – Baasaboor diblomaasi ah
Kenya – Baasaboor caadi ah
Eritrea – Baasaboor diblomaasi ah